Bhaibheri muchiGeorgian—Kushandurwa Kwaro
Chinyorwa chechiGeorgian chekuma1300 chinonzi The Mokvi Four Gospels
GEORGIA | 1924 kusvika 1990
CHIGEORGIAN chiri pakati pemitauro yakatanga tanga kushandurirwa Bhaibheri uye mimwe yacho inosanganisira chiArmenian, chiCoptic, chiLatin nechiSyriac. Zvinyorwa zvekare zvechiGeorgian zvemabhuku eEvhangeri, zvetsamba dzaPauro uye zveMapisarema zvinonzi zvakanyorwa pakati pemakore ekuma400 C.E. kana kuti makore iwayo asati asvika. Mumazana emakore akazotevera, vanhu vakatowedzera kushandura uye kukopa Bhaibheri vachiriisa muchiGeorgian, zvikaita kuti pave neshanduro dzakawanda. *
Mabhuku uye tsika dzevanhu vekuGeorgia zvakanyanyobva pane zvinotaurwa neBhaibheri. Semuenzaniso, nyaya inosuwisa yamambokadzi Shushanik, iyo ingangodaro yakanyorwa makore ekuma400 ava kunopera, inewo mavhesi uye mashoko akatorwa muBhaibheri kana kuti anotsanangura dzimwe ndima dzeBhaibheri. Munhetembo yake yakareba chaizvo inonzi Vepkhvistqaosani (The Knight in the Panther’s Skin), yakanyorwa munenge muna 1220, mudetembi anonzi Shota Rustaveli akataura nezvetsika dzinofanira kutevedzerwa nevaKristu. Akataura nyaya dzakadai seushamwari, kuva nerupo uye kuratidza rudo kuvanhu vatisingazivi uye tsika idzi dzichiri kukosheswa nevanhu vechiGeorgian.
^ ndima 3 Kuti uwane mamwe mashoko ona nyaya yakanzi, “Pfuma Yakavanzwa Kwemazana Emakore,” iri muNharireyomurindi yaJune 1, 2013.